ग्लूटाथियोन: भर्खरको एन्टी-एजिंग र ह्वाइटनिंग ड्रग्स र सप्लीमेन्टहरू
ग्लूटाथियोन: भर्खरको एन्टि-एजिंग र ह्वाइटनिंग ड्रग्स र सप्लीमेन्ट २०२०
Glutathione, ग्लुटाथियोन ईन्जेक्सनमा होस्, ग्लुटाथियोन क्रीम वा यसको स्वाभाविक रूपमा हुने रूप, एक मिनेट प्रोटीन हो जसले तीन अमीनो एसिडहरू, अर्थात् सिस्टाइन, ग्लूटामेट, र ग्लाइसिन समावेश गर्दछ। यद्यपि ग्लुटाथियोन एक प्राकृतिक कलेजोको उत्पादन हो, तर यो फल, मासु र तरकारीहरूमा पनि एक प्रमुख रासायनिक पदार्थ हो।
ग्लुटाथियोन मौखिक, श्वास, वा इन्जेक्सनको माध्यमबाट शरीरमा यसको स्तरलाई फेरि विभिन्न जैविक प्रक्रियाहरू र लाभहरूको लागि पुनः भरिपूर्ण गरिन्छ। ग्लुटाथियोन समारोहले अन्य कार्यहरू मध्ये प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन, फोक्सोको रोग उपचार, केमोथेरापी साइड इफेक्ट राहत, र रक्ताल्पता रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
ग्लुटाथियोनले कसरी काम गर्छ?
ग्लुटाथियोन प्रकार्य प्रक्रियाको एक सरणीमा काम आउँदछ जुन मानव शरीरमा हुने विभिन्न ग्लूटाथियोन लाभहरू प्रस्तुत गर्न। यी प्रक्रियाहरूमा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया टिशूहरूको मर्मत र निर्माणको साथसाथै प्रोटीन र रासायनिक प्रशोधन समावेश गर्दछ।
साथै, यसको उत्कृष्ट ऑक्सीकरण शक्तिको लागि परिचित, ग्लुटाथियोनले मानव शरीरले विटामिन सी र ई जस्ता अक्सिडन्टहरूलाई रीसायकल गर्ने र सुधार गर्ने तरिकामा सुधार गर्छ। CoQ10 र अल्फा lipoic एसिड।
शरीरमा ग्लूटाथियोनका फाइदाहरू के हुन्?
शरीरमा पूरक वा पर्याप्त उत्पादनको लागि सही ग्लुटाथियोन खुराकको साथ, एक व्यक्ति शरीरमा अणुको पर्याप्त आपूर्तिको परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरूको आनन्द लिन सक्ने उच्च अवसर खडा गर्दछ। साँचो ग्लुटाथियोन फाइदाहरू समावेश:
१. एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडन्टको रूपमा
उमेर र विभिन्न बिरामीताको लागि अक्सिडेटिभ तनाव एक प्रमुख योगदान कारक हो। यो तब हुन्छ जब स्वतन्त्र रेडिकलको उत्पादनले शरीरको यी स्वतन्त्र रेडिकलहरूसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई पन्छाउँदछ।
जब असंतुलन हुन्छ, अतिरिक्त फ्रि रेडिकलहरूले शरीरको कोषहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ जुन एक उमेरलाई छिटो बनाउँदछ र विभिन्न रोगहरूको खतरामा पर्दछ। अत्यधिक अक्सिडेटिभ तनावको परिणाम स्वरूप देखा पर्न सक्ने रोगहरूमध्ये मधुमेह, क्यान्सर, दम, गठिया र इन्फ्लेमेटरी डिसअर्डरहरू समावेश छन्।
अर्कोतर्फ, जब शरीरमा ग्लुटाथियोन जस्ता उचित स्तरको एन्टिआक्सिडन्टहरू हुन्छन्, यसले वर्तमान निःशुल्क ओक्सिडन्टहरूसँग लड्न सक्षम हुन्छ। यसको एन्टीओक्सिडिभ ​​शक्ति र उच्च सांद्रतामा शरीर कोशिकामा अवस्थित क्षमताको कारण, ग्लुटाथियोन प्रकार्य शरीरलाई विभिन्न आक्सीडन्टहरू र उनीहरूका विनाशकारी प्रभावहरू विरूद्ध लड्न मद्दत गर्न धेरै प्रभावकारी छ।
२.A एक डिटोक्सिफायरको रूपमा
ग्लुटाथियोनले हाम्रो शरीरमा विषाक्त पदार्थहरू डिटोक्सिफाई गर्दछ। खाद्य पदार्थहरू र अन्य पदार्थहरू जुन मानिसहरू खान्छन्का कारणले गर्दा उनीहरूको शरीर विषको चपेटामा पर्दछ जसले उनीहरूको अंग र जैविक प्रक्रियाहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। यस बाहेक, शरीर आफैंमा यसको सामान्य प्रक्रियाको दौरान विषाक्त पदार्थ उत्पादन गर्न सक्दछ।
उदाहरणका लागि, ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा, शरीरले सुपर अक्साइड उत्पादन गर्न सक्दछ। सुपरोक्साइडमा अधिक मात्रामा इलेक्ट्रोन रहेको कुरा विचार गर्दा यो कोशिका झिल्ली, डीएनए, माइटोकन्ड्रिया, यसको नजिकका शरीरका अन्य भागहरूमा विषाक्त हुन सक्छ।
भाग्यवस, जब तपाईंको शरीरमा यसको पर्याप्त स्तरहरू हुन्छन्, ग्लुटाथियोन डिटॉक्सिफाई र सुपरोक्साइडहरू बेअसर गर्दछ, शरीरलाई उनीहरूको विषाक्त प्रभावबाट जोगाउँदै। सुपरआक्साइडहरूको थपमा, ग्लूटाथियोनले तपाईंको शरीरमा उपस्थित हुन सक्ने अन्य थुप्रै प्रकारका विषाक्त अणुहरूलाई पनि निभाउँछ र बेअसर गर्दछ।
Skin. छाला र एन्टी-एजिंगका लागि
सबैजना उत्तम छाला लिन चाहन्छन्। दुर्भाग्यवस, बुढेसकालको प्रक्रिया, हार्मोनल परिवर्तनहरू, केहि जीवनशैली कारकहरू जस्तै गरिब पोषण र शारीरिक व्यायाम आदत, तपाइँको छाला तपाइँको अपेक्षाहरूको विपरित हुन सक्छ। अझै खराब, एन्टी-एजिंग स्किनकेयर उत्पादनहरू जस्तै मॉइस्चराइजरहरू, क्रिम र सीरमहरू निर्दोष छाला प्राप्त गर्न तपाईंको प्रयासमा असह्य हुन सक्छन्।
यदि त्यो तपाईंको हालको स्थिति हो भने, यो तपाईंलाई सल्लाह दिनुहोस् कि सल्लाह दिनुहोस् छालाका लागि ग्लुटाथियोन सुधार।
एक प्रयास छालाका लागि ग्लुटाथियोनले सेलुलर र माइटोकन्ड्रियल कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, र त्यसो भएमा तपाईंको छालाको त्रुटिहरूमा योगदान पुर्‍याउने क्षतिग्रस्त शरीरको कोषहरूलाई निको पार्ने क्षमता छ।
यसका साथै ग्लुटाथियोनले शरीरको कोशिकाको पुन: निर्माणलाई समर्थन गर्दछ, र यो तपाईंको छालाको स्वास्थ्यको पुनर्स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो।
बिभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले छाला pigmentation र शिकन उपस्थिति घटाउन को लागी ग्लूटाथियोन को क्षमता रद्द गरेको छ। साथै, एन्टीआक्सीडन्ट छालाको लोचलाई सुधार गर्न फेला पारिएको छ। समग्र प्रभाव एक स्वस्थ र सुन्दर छाला टोन र बनावट को साथ एक देखिने व्यक्ति छ।
Brain. दिमाग र मुटुको लागि
उन्नत उमेरको साथ, व्यक्तिहरू सामान्यतया न्युरोडोजेनरेसनको परिणाम स्वरूप मेमोरी मुद्दाहरूको अनुभव गर्दछन्। यो तब हुन्छ जब मस्तिष्क न्यूरन्सको एक महत्वपूर्ण मात्रा बिग्रन्छ वा मरे। नतिजाको रूपमा, दिमाग संकुचित हुन्छ र यसको पूर्ण क्षमतामा कार्य गर्न सक्षम हुँदैन।
दुर्भाग्यवस, बुढेसकालको प्रक्रियाको यस्ता प्रभावहरूबाट व्यक्तिहरू भाग्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ, र सौभाग्यवस, शरीरमा ग्लुटाथियोनको स्तर सुधार गर्न ग्लुटाथियोन पूरकले बुढेसकालको प्रक्रियालाई कम गर्न र सम्बन्धित संकेत र लक्षणहरूलाई सुधार्न वा ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। एन्टिऑक्सिडन्ट सजीलो हुन्छ र न्यूरो टिश्यु क्षति दर कम गर्दछ, र बिग्रिएको न्युरल टिश्यूहरूको मर्मत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
२०१ 2017 मा गरिएको एक अध्ययनमा, अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि इंट्रानेसल ग्लूटाथियोनले सुधारको लागि योगदान पुर्‍यायो अल्जाइमरका लक्षणहरू मानसिक अवस्था भएका बिरामीहरूका बीच।
ग्लुटाथियोन एन्टिऑक्सिडन्ट को लागि पनि महत्वपूर्ण छ हृदय स्वास्थ्य। यो ग्लुटाथियोनको मुख्य फाइदाहरूमा पाइन्छ, र यसले ग्लूटाथियोन अणुहरूको क्षमता शरीरमा “लिपिड अक्सीकरण” लाई प्रतिरोध गर्न थाल्छ।
कुनै पनि हृदय रोगको शुरुवात अवस्था धमनीको भित्तामा धमनी पट्टिकाले विशेषता दिन्छ। तब, प्लेग बिच्छेद भयो, रगत प्रवाहमा अवरोधको कारण। फलस्वरूप, हृदयघात वा स्ट्रोक हुन्छ।
भाग्यवस, जब तपाईंसँग तपाईंको शरीरमा पर्याप्त ग्लूटाथियोन आपूर्ति हुन्छ, एन्टिऑक्सिडन्टले पेरोक्सिनिट्रिट्स, पेरोक्साइडहरू, नि: शुल्क रेडिकलहरू, साथ साथै सुपरआक्साइडलाई निष्क्रिय गर्न ग्लुटाथियोन पेरोक्साइडस भनिने एक इन्जाइमसँग मिलेर काम गर्दछ। यदि अनियंत्रित भएमा, यी सबै यौगिकहरूले लिपिड ऑक्सीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ जसले तपाईंको मुटुको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्दछ। तसर्थ, ग्लूटाथियोनले तपाईको मुटुलाई यिनीहरूको शरीरमा कम्पाउन्डहरूको उपस्थितिको कारण हुन सक्ने क्षतिहरूबाट बचाएर तपाईंको मुटुको फाइदा गर्दछ।
Inflammation. जलनको लागि
ग्लुटाथियोन सूजन राहत लाभ ग्लोटाथियोन लोकप्रिय बनाउने अर्को चीज हो। लगभग कुनै पनि पुरानो रोग, मधुमेह, क्यान्सर र हृदय रोग सहित, एक सूजन द्वारा विशेषता हो।
घाइते शरीर क्षेत्र वा वरपर सूजनहरू पनि सामान्य हुन्छन्। यद्यपि भड्काउने प्रतिक्रियाहरू सामान्यतया उपचार प्रक्रियाको अंश हुन्, कहिलेकाँही तिनीहरू अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म स्थिर रहन सक्छन्, जसमा अलार्मको कारण हुन्छ। यो जहाँ ग्लूटाथियोन सूजन राहत लाभ काम आउँछ।
विभिन्न अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि ग्लुटाथियोन पूरक वा शरीरमा आन्तरिक-उत्पादित ग्लुटाथियोनले शरीरको प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिने सूजनको वृद्धि र कमीलाई नियन्त्रण गर्दछ। कथित रूपमा, ग्लुटाथियोन अणुहरूले यसलाई एक व्यक्तिको सेतो कक्षहरूमा प्रभाव पार्दै हासिल गर्दछ। त्यस्तै, तिनीहरू क्रोनिक ज्वलनहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम छन्।
6. प्रतिरक्षा प्रणाली को लागी
ग्लुटाथियोन खाना वा ग्लुटाथियोन पूरक तपाईको शरीरलाई पर्याप्त ग्लुटाथियोन अणुहरू प्रदान गर्दछ तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली प्रबल गर्न। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणालीको साथ, तपाईंको शरीरले विभिन्न रोग रोगजनकहरूसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न सक्छ, ग्लुटाथियोन भिटामिन सी सम्भावित समानतालाई धन्यवाद प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई समर्थन गर्ने।
वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार सक्रिय ग्लुटाथियोनले सेतो कोषहरू जस्तै प्राकृतिक हत्यारहरूको साथ साथै टी कोषहरूको कार्यक्षमता सुधार गर्दछ। बढावाका साथ, टि कोषहरूले ब्याक्टेरिया र भाइरल संक्रमणको विरूद्ध लड्न जिम्मेवार पदार्थहरूको एक उच्च संख्या उत्पादन गर्दछ। यी पदार्थहरूले ईन्टरफेरोन-गामा साथै इन्टर्ल्युकिन्स -२ र इन्टरल्युकिन -१२ समावेश गर्दछ।
एउटा अध्ययनमा अन्वेषकहरूले पत्ता लगाए कि ग्लुटाथियोन एन्टिऑक्सिडन्टले प्राकृतिक किलर कोषहरूको क्षमतालाई सुधार गर्दछ रोगजनक जीवहरूलाई २००% मार्न ग्लूटाथियोन पूरकको प्रयोग गरेर using महिना पछि। बाहेक, ग्लुटाथियोन खाना र पूरकहरूले म्याक्रोफेजेस क्षयरोगको बिरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ। माईकोब्याक्टेरियम क्षयरोग एक जीवाणु हो जसले क्षयरोग निम्त्याउँछ।
Epstein – बार भाइरस, लाइम रोग र हेपेटाइटिस जस्ता संक्रमणले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन सक्छ। यद्यपि ग्लुटाथियोन एन्टिऑक्सिडन्टको पर्याप्त आपूर्तिको साथ प्रतिरक्षा प्रणालीले यस्ता रोगहरूको दमनकारी प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्छ।
7. स्वतन्त्रताको लागि
अन्वेषकहरूले सुझाव दिन्छ कि अटिजम र कम ग्लुटाथियोन स्तर बीचको एक सीधा सम्बन्ध छ। यसले प्रमाणलाई देखाउँदछ जुन अटिस्टिक बच्चाहरूको अवरोध बिनाका बच्चाहरूको तुलनामा कम ग्लुटाथियोन स्तर हुन्छ।
भाग्यवस, सही ग्लुटाथियोन खुराक र पूरकको पालनाको साथ, स्वतन्त्रताको साथ बच्चाहरू अझ राम्रो हुन सक्छन्। २०११ को अध्ययनले देखाउँदछ कि ग्लुटाथियोन मौखिक सप्लीमेन्ट्स वा ग्लुटाथियोन इंजेक्शनले केही अटिजम प्रभावहरूलाई कम गर्न सक्छ।
Cancer. क्यान्सरको लागि
ग्लुटाथियोन क्यान्सर लाभ अर्को चीज हो जुन स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले मानव शरीरमा पर्याप्त ग्लूटाथियोनको महत्त्वमा जोड दिन्छ। धेरै अध्ययन अनुसार, कि ग्लुटाथियोन क्यान्सर रोकथाम क्षमता स्पष्ट छ। यी अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि ग्लुटाथियोन मेकानिजमले क्यान्सरको प्रगति रोक्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ अर्को ग्लुटाथियोन क्यान्सर प्रभाव पनि छ। केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले क्यान्सर बिरामीहरूलाई ग्लुटाथियोन इन्जेक्सनहरू प्रतिकूल केमोथेरापी प्रभावहरू रोक्नको लागि प्रयोग गर्दछन्।
Weight। वजन घटाउन को लागी
जो मानिस पेटको बोसो वा मोटोपनाको साथ संघर्ष गरिरहेका छन् उनीहरूले ग्लुटाथियोन खाना खाएर वा ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट लिएर आफ्नो वजनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछन्। धेरै जसो विषाक्त पदार्थहरू र भारी कार्ब र चिनीको खपतबाट हुने विषाक्त पदार्थहरू र फ्रि रेडिकलहरू मोटापा र पेटको बोसोको प्रमुख कारण हुन्।
दुई मध्ये कुनै एकको अत्यधिक खपतले शरीरलाई थप फ्याट भण्डार गर्न र कम क्यालोरीहरू जलाउन बनाउँदछ। नतिजाको रूपमा, तपाईले अधिक तौल प्राप्त गर्नुहुन्छ, र हुनसक्छ तपाईको पेटले उच्च फ्याट संचयको अनुभव गर्दछ। यदि ध्यान नदिएमा, मोटोपनाले क्यान्सर जस्ता भड्काउने रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
भाग्यवस, ग्लुटाथियोन इन्जेक्सन विटामिन डी, बी १२ र डी जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छन् जसले शरीरलाई विषाक्त पदार्थ बाहिर फ्याँक्न सहयोग गर्दछ। ग्लुटाथियोन मेकानिजमेन्टले शरीरलाई क्यालोरी र फ्याट जलाउन सहयोग गर्दछ, यसरी प्रमोट गर्दै तौल घट्नु र राम्रो शरीर आकार।
१०. परिधीय संवहनी रोगको लागी
परिधीय संवहनी रोग एक स्वास्थ्य अवस्था हो जुन परिधीय धमनीहरूको अवरुद्धताको कारण हुन्छ। यसले प्राय: खुट्टालाई असर गर्छ। ग्लूटाथियोनले तपाईको शरीरमा रगतको परिसंचरणमा सुधार गरी तपाईलाई यस रोगबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंसँग पहिले नै यो रोग छ भने, ग्लुटाथियोन मौखिक वा इंजेक्शन सुधारिएको रक्त परिसंचरणको कारण प्रशासनले लक्षणहरू कम गर्न सक्छ। सहि ग्लुटाथियोन खुराकको पालनाको साथ, तपाईंले कुनै पीडा महसुस नगरी हिंड्नु सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो समयको कुरा हुनेछ।
११. एथलेटिक प्रदर्शन
एथलेटिक प्रदर्शन पनि हो ग्लुटाथियोन प्रयोग गर्दछ। अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि ग्लुटाथियोनले एक एथलीटको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्दछ यदि ऊ / उनीले खेल गतिविधि अघि ग्लूटाथियोन पूरक प्रयोग गर्दछ।
एउटा अध्ययनमा, आठ पुरुषहरूलाई एथलेटिक व्यायाम सुरू गर्नु अघि १,००० मिलीग्राम ग्लुटाथियोन दिइयो। अध्ययनको सहभागीको रूपमा प्रयोग भएका अन्य पुरुषहरूलाई प्लेसबोमा राखिएको थियो।
एथलेटिक अभ्यास पूरा भएपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले भने कि ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट प्राप्त गर्ने समूहले प्लेसबो समूहको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरे। पछिल्लो भन्दा कम थकान र रगत ल्याक्टिक एसिड को कम मात्रा अनुभव गरे पछिल्लोको तुलनामा। सामान्यतया, शरीरमा उच्च ल्याक्टिक एसिड ले थकान बढाउछ, रक्तचाप घटाउँछ र मांसपेशियों को दुखाइ र श्वासप्रश्वासको समस्या उत्पन्न गर्दछ।
ग्लुटाथियोन पाउडर जुन उपभोग्य ग्लुटाथियोन इंजेक्शन वा पूरकहरूको रूपमा प्रशोधन गरिएको छ त्यस्ता मुद्दाबाट एथलीटलाई जोगाउँछ। यसले उनीहरूलाई उनीहरूको व्यायाम र प्रतिस्पर्धामा राम्रो प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ।
१२. मधुमेह रोगीहरूको लागि
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, मधुमेह वा तीव्र उच्च रगतमा चिनी ग्लुटाथियोनको कमीसँग जोडिएको हुन्छ
मानव शरीरमा। उच्च चिनीको स्तरले अक्सिडेटिभ तनाव निम्त्याउन सक्छ जसले टिश्यू क्षति निम्त्याउँछ।
जस्तै मधुमेह पीडित व्यक्ति आफ्नो ग्लूटाथियोन को कमी सम्बोधन गर्दा एक उल्लेखनीय लक्षण राहत अनुभव गर्न सक्छ। यसको लागि एक प्रभावी समाधान ग्लुटाथियोन मौखिक सेवन ग्लुटाथियोन फूड वा ग्लुटाथियोन पूरकको सेवन गरेर सुधार गरिएको छ। वैकल्पिक रूपमा, तिनीहरू ग्लुटाथियोन ईन्जेक्सनहरू ग्लूटाथियोनको कमीलाई ठीक गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१.. पार्किन्सनको सिन्ड्रोमको लागि
केही अध्ययनहरूले देखाए कि शरीरमा पर्याप्त मात्रामा ग्लुटाथियोन कायम राख्दा पार्किन्सन रोगका लक्षणहरूको राहत पाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ। यो रोगले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको अखण्डता र कार्यक्षमतालाई असर गर्छ, जसले एक व्यक्तिलाई काम्ने र कठोर जोड्ने लक्षणहरू अनुभव गर्दछ।
अन्वेषकहरू पत्ता लागेका छन् कि ग्लुटाथियोन समारोह को लक्षण को कम गर्न को लागी एक सम्भव उपचार हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ पार्किन्सनको रोग। यद्यपि ग्लोटाथियोन मौखिक पूरक यसमा सुरक्षित र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण छैन। ग्लोटाथियोन मौखिक पूरकको प्रभाव र सुरक्षा निर्धारण गर्न थप अनुसन्धान प्रकृयामा छ।
१.. कपालको लागि
महत्त्वपूर्ण इन्टरसेल्युलर ऑक्सीडन्ट भएकोले ग्लुटाथियोन क्रीमले तपाईंको कपालको स्वास्थ्य बढाउन सक्छ। ग्लुटाथियोन सूजन राहत एक ठूलो फाइदा हो कि जसले टाउकोको ज्वलन अनुभव गर्दछ जसले केशविहीन सराहना गर्दछ।
यसबाहेक, यदि तपाईं आफ्नो कपाल कोसेजबाट बच्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं आफ्नो शरीरमा स्वस्थ ग्लूटाथियोन स्तर कायम राख्नुहुन्छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि ग्लुटाथियोन अभावले कपाल फुलेको बढावा दिन्छ। यसलाई प्राप्त गर्न ग्लुटाथियोन मेकानिजमेन्टमा डिक्सिफिकेसन र अक्सिडन्ट्सको तटस्थीकरणको माध्यमबाट अक्सिडेशन तनाव रोक्न शामिल छ।
ग्लुटाथियोन कसलाई चाहिन्छ? सामान्य खुराक के हो?
सबैलाई इष्टतम शरीर प्रदर्शन, रोग रोकथाम र स्वस्थ र आकर्षक देखिनको लागि ग्लुटाथियोन चाहिन्छ।
जे होस्, ग्लुटाथियोनको कमीका साथ युवा व्यक्तिहरू र बढ्ता उमेरकालाई ग्लुटाथियोन पूरक हुन आवश्यक पर्दछ वा अभावका लक्षण / प्रभावहरूको राहतबाट बच्न वा अनुभव गर्न। तिनीहरूले ग्लुटाथियोन पूरक मौखिक रूपमा वा इन्जेक्सनहरू मार्फत लिन सक्छन्।
यस समयमा, सही ग्लुटाथियोन खुराक स्थापना गर्न पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण छैन। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले निश्चित चिकित्सा अवस्थाका लागि निश्चित ग्लुटाथियोन खुराकको लागि अस्थायी रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। यी मात्राहरू उमेर, लि as्गका साथै व्यक्तिको मेडिकल ईतिहास जस्ता विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। त्यसकारण, ग्लुटाथियोन डोज एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन्छ, साधारण मेडिकल सर्तका बिरामीहरूमा पनि।
हाम्रो ग्लूटाथियोन कसरी बढाउने?
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो शरीरमा ग्लुटाथियोन स्तर बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग ग्लूटाथियोनको कमी छैन भने, ग्लुटाथियोनयुक्त आहारले तपाईंलाई कमिलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। केहि खानाहरू जुन तपाईं यस उद्देश्यका लागि गणना गर्न सक्नुहुन्छ तरकारीहरू (बन्दकोबीहरू, पालक, ब्रोकली, ब्रसल स्प्रउट्स), अखरोट, टमाटर, काकडी, चाइभ्स, लसुन र ताजा तयार गरिएको मासु सामेल छन्। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यी खानाहरू ग्लुटाथियोनमा समृद्ध छन्।
लगातार पानी पिउने (हरेक दिन लगभग औन्स), 64 देखि hours घण्टा हरेक दिन / रात सुत्न, तनावबाट जोगिन, र हप्तामा कम्तिमा days दिन शारीरिक व्यायाम गर्नाले तपाईंको शरीरलाई ग्लूटाथियोन उत्पादन क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ।
तपाईंको शरीरमा ग्लुटाथियोन स्तर बढाउने अर्को तरिका ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट लिनु हो। यी पूरकहरू मौखिक वा इन्जेक्सनको रूपमा लिन सकिन्छ। तिनीहरू विशेष गरी ती व्यक्तिहरूका लागि धेरै सहयोगी हुन् जसले ग्लुटाथियोनको कमी भएको पुष्टि गरेका छन्। पूरकहरू क्रिमको रूपमा पनि उपलब्ध छन् जबकि अन्यहरू (इंट्रावेनस) IV अनुप्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ।
के ग्लुटाथियोनको कमीको कारण हुन्छ?
ग्लुटाथियोन अभाव मुख्यतया बिभिन्न कारकका कारण हुन्छ। एउटा बुढेसकालको प्रक्रिया हो। तपाईंको ग्लुटाथियोन स्तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अध्ययनले देखाउँदछ कि मानव शरीर कोशिकामा ग्लुटाथियोनको उत्पादनले २० वर्षको उमेरलाई पार गरेको वा बढेको व्यक्तिको लागि प्रत्येक १० बर्षमा १० प्रतिशतको दर घटाउँछ।
दोस्रो कारक खराब पोषण हो। सही मात्रामा ग्लुटाथियोन युक्त खाद्य पदार्थ खान असफलता (सातदेखि नौ सर्भिक जैविक भिजीहरू र फलफूल दैनिक) तपाइँको शरीरमा ग्लुटाथियोनको कम आपूर्ति हुन्छ।
ग्लुटाथियोनको कमीमा योगदान पुर्‍याउने अन्य कारकहरूमा दीर्घकालीन तनाव, चिन्ता, उदासीनता, अत्यधिक कडा शारीरिक अभ्यास र प्रकाश प्रदूषण समावेश छ। विषाक्त र हानिकारक पदार्थहरू जस्तै एसिटामिनोफेन, कीटनाशक, बेन्जोपाइरेन्स र हाउजवेयर रसायनहरूमा एक्सपोजर पनि अर्को कारक हो।
के त्यहाँ कुनै ग्लुटाथियोन साइड इफेक्ट छन्?
हालसम्म त्यहाँ पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण छैन ग्लुटाथियोन साइड इफेक्ट। यद्यपि, केहि प्रयोगकर्ता समीक्षाहरूले सुझाव दिन्छ कि ग्लुटाथियोन साइड इफेक्टहरू जित्न सकिन्छ, तर दुर्लभ मामिलाहरूमा। समीक्षाका अनुसार, केहि केसहरूमा ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्टहरू पछि पेटमा, चक्राउन वा फोलेको अनुभव गर्न सक्दछ। भाग्यवस, यी ग्लुटाथियोन प्रभावहरू प्राय हल्का र कम समय पछि गायब हुन्छन्।
यदि तपाईं दममा हुनुहुन्छ भने, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाईं इनहेल ग्लुटाथियोनबाट बच्नुहोस्। ग्लुटाथियोनको यो फाराम प्रयोग गर्नाले तपाईंको शरीरमा एलर्जीको प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न सक्दछ। साथै, गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूलाई सम्भव गम्भीर ग्लुटाथियोन साइड इफेक्टबाट बच्न ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्टहरू प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ।
ग्लोटाथियोनको हालको स्थिति र मार्केटमा अनुप्रयोग
ग्लुटाथियोन बजारमा रिडुस्ड ग्लुटाथियोन (GSH) वा Oxidized Glutathione (GSSG) को रूपमा उपलब्ध छ। बिभिन्न वैधानिक औषधि नियामक अधिकारीहरूले ग्लुटाथियोनको दुवै प्रकारको बिक्री र खरीदलाई अनुमोदन गरेको छ, तर केहि नियम र सर्तहरूको अन्तर्गत।
ग्लुटाथियोन पाउडर अनुप्रयोगहरूको एक एर्रे छ। फार्मास्यूटिकल्समा प्रयोगको अलावा, धेरै उत्पादकहरूले ग्लुटाथियोन पाउडर खरिद गरेर यसलाई खाद्यान्नमा मुख्य घटकको रूपमा प्रयोग गर्दछ, स्वास्थ्य उत्पादनहरू र सौन्दर्य प्रसाधन।
हामी ग्लूटाथियोन कहाँ पाउन सक्छौं?
तपाईं ग्लोटाथियोन खानाबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको स्थानीय गीला बजार वा बगैंचाबाट यसमा धनी छन्। यदि तपाईं ग्लुटाथियोन पाउडर वा ग्लुटाथियोन पूरक चाहनुहुन्छ भने ग्लुटाथियोन क्रिम, गोली, समाधान, ट्याब्लेटहरू, सिरप वा स्प्रेहरू, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो स्थानीय औषधि पसल वा एक स्थानीय डाइटरी पूरक को विशेषज्ञता स्टोरबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि ग्लुटाथियोन पाउडर वा ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट पाउनको लागि सब भन्दा सुविधाजनक ठाउँ इन्टरनेटमा छ। त्यहाँ धेरै अनलाइन औषधि वा आहार पूरक स्टोरहरू छन् जुन तपाईं ग्लूटाथियोनको परेशानी खरीदको लागि गणना गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंले पैसाको हात परिवर्तन गर्नु अघि विश्वासयोग्य अनलाइन विक्रेतासँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। यो लागू हुन्छ जब तपाईं एक बनाउन चाहानुहुन्छ ग्लुटाथियोन पाउडर खरीद गर्नुहोस्.
ग्लूटाथियोन एक प्रभावकारी एन्टीएजिंग पदार्थ हो जुन हामी सबैलाई हाम्रो शरीरमा चाहिन्छ। ग्लूटाथियोनले हाम्रो शरीरमा विषाक्त पदार्थहरूलाई डिटॉक्सिफाई गर्दछ र ढिलो हुँदै गयो वा बुढेसकालको प्रक्रियालाई उल्टाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले स्वास्थ्य लाभहरूको एक एर्रे प्रदान गर्दछ, क्यान्सर रोकथाम र पार्किन्सन रोग लक्षण राहत सहित। तपाईं ग्लुटाथियोन विशिष्ट खाद्यहरूबाट वा ग्लुटाथियोन पाउडर पूरकबाट उपलब्ध गर्न सक्नुहुनेछ भौतिक र अनलाइन औषधि / आहार पूरक स्टोरहरूमा उपलब्ध।
Glutathione एक मिनेट प्रोटीन हो जुन तीन अमीनो एसिडहरू, अर्थात् सिस्टिन, ग्लूटामेट, र ग्लाइसिन समावेश गर्दछ। यो लेख मा केन्द्रित छ ग्लुटाथियोन लाभ, उपयोग, साइड इफेक्ट र खुराक। तपाईं पनि ग्लुटाथियोन प्राप्त गर्न को लागी देख्नुहुनेछ।
Deponte, एम (२०१ 2013) ग्लुटाथियोनी क्याटालिसिस र ग्लुटाथियोन-निर्भर एन्जाइमहरूको प्रतिक्रिया संयन्त्र। बायोचिमिका र बायोफिजिका एक्टि (BBA) -सामान्य विषयहरू, 1830(5), 3217-3266।
Noctor, G., Mhamdi, A., Chaouch, S., हान, YI, Neukermans, J., Marquez ‐ Garcia, BELEN,… & Foyer, CH (२०१२)। बोटहरूमा ग्लुटाथियोन: एक एकीकृत सिंहावलोकन। प्लान्ट, सेल र वातावरण, 35(2), 454-484।
ओवेन, जेबी, र बटरफील्ड, DA (२०१०) ऑक्सीकरण / कम ग्लुटाथियोन अनुपातको मापन। मा प्रोटीन मिसफोल्डिंग र रोग र बुढेसकालमा सेलुलर तनाव (पृ। २269 -277 -२XNUMX।) हुमना प्रेस, टोटोवा, न्यू जर्सी।
रिबास, भि।, गार्सिया-रुइज, सी।, र फर्नांडीज-चेका, जेसी (२०१ 2014)। ग्लुटाथियोन र माइटोकन्ड्रिया। फार्माकोलजीमा फ्रन्टियर्स, 5, 151।
Smeyne, एम, र Smeyne, आरजे (२०१ 2013)। ग्लुटाथियोन मेटाबोलिजम र पार्किन्सन रोग। नि: शुल्क रेडिकल जीवविज्ञान र चिकित्सा, 62, 13-25।
ट्राभर्सो, एन।, रिक्सिएरली, आर।, निट्टी, एम।, मारेन्गो, बी।, फुरफारो, एएल, प्रोन्जाटो, एमए, ... र डोमेनकोट्टी, सी (२०१))। क्यान्सर प्रगति र चेमोरेस्टाइनमा ग्लुटाथियोनको भूमिका। ऑक्सीडेटिव औषधि र सेलुलर दीर्घायु, 2013.
ग्लूथियन पाउडर (-70०-१-18-8)
२. कसरी ग्लूटाथियोनले काम गर्छ?
Gl.असे ग्लुटाथियोन चाहिन्छ? सामान्य खुराक के हो?
Hat. ग्लुटाथियोनको अभाव के हुन्छ?
A. के त्यहाँ कुनै ग्लुटाथियोन साइड इफेक्ट छन्?
8.Glutathione को वर्तमान स्थिति र बजार मा अनुप्रयोग
Gl। हामी ग्लूटाथियोन कहाँ पाउन सक्छौं?